Wholesale Multi-nzvimbo inowanikwa epurasitiki cheya yekutengesa zvakachipa
Tine ruzivo mugadziri. Kurova ruzhinji rwezvakakosha zvitupa pamusika wayo weFekitori Zvakananga kupa China Chikamu Sachigaro Yemazuva Ano Stylish PP Pulasitiki Chigaro neMetal Legs MID Century Yemazuva Ano Sachigaro weKurara Kamuri, Kudya, Kamuri yekurara, Lightweight Kicheni Chairs 1661 #, Tinogona ...
Maresitorendi eDenver anogadzira zvekudya kwekunze munguva yechando
Yakakurumbira fanicha dhizaini kambani kubva kuChina
Kushandisa bamboo inzira yakanaka yekushongedza imba yako
ne admin pane 20-08-31
Nhasi kune nzira dzakawanda dzekushongedza imba ine zvekunze fanicha yeakasarudzika dhizaini. Kunyangwe iwe uchida yeAsia kana yeWestern décor, iwe ungangofarira kushandisa bamboo kana rattan fanicha kana pasi kuti upe imba yako kuratidzika kwakasarudzika uye kunzwa. Nhengo yemhuri yehuswa, bamboo inguva yakatetepa ...
Forman yakagadzirira kupa zvirinani sevhisi uye zvigadzirwa mushure me COVID-19
China International Furniture Expo inyanzvi yekuratidzira fenicha yepasi rose ine mukurumbira wakanaka kweanopfuura makore gumi nemanomwe, yakatangwa muna 1993. Seimwe yematatu makuru ekuratidzira fenicha pasi pamwe neHigh Point Market uye ini Saloni Milano, Furniture China ichave h ...
Forman akavandudza michina yejekiseni
Nhau dzakanaka ! Forman yatenga mamwe mana jekiseni michina izvozvi kuti tiwedzere kugona kwedu kugona！ Iye zvino neese makumi maviri maseti ejekiseni michina, yedu yekugadzira kugona ichavandudzwa zvakanyanya! Sezvo nyika zhinji uye zhinji dzichizopora kubva pakubuda kwe COVID-19, vatengi vazhinji vanovhura zvekare ...
YEMAHARA KUSANGANA 0086-18630605237
Kero Shengfang Town, Bazhou Guta, Hebei Province, China